PressReader - Kwayedza: 2018-11-02 - Varimi vakakumba mibairo kuSeed Co
Varimi vakakumba mibairo kuSeed Co
Kwayedza - 2018-11-02 - Nhau Dzevarimi - Malven Mugadzikwa
KAMBANI huru mukuuchika nekutenges­a mbeu muZimbabwe, yeSeed Co, svondo rapera yakapembed­za varimi vakawana goho guru kudarika vamwe kuburikidz­a nekuvapa mibairo pasi pechirongw­a chayo cheEleven Tonne Plus Club Promotion.
Pasi pechirongw­a ichi, murimi anopinda mumakwikwi aya kana achinge asvitsa goho rematani echibage gumi nerimwe pahekita zvichienda mberi.
Vachitaura pakupihwa kwevarimi mibairo iyi, mutevedzer­i wegurukota rezveminda, kurima, mvura, mamiriro ekunze nekugarisw­a kwevanhu patsva – VaVangelis Haritatos – vanoti chirongwa ichi chakanaka nekuti chinounza maguta munyika sezvo chichiita kuti varimi vashande nesimba kuburikidz­a nekuita makwikwi anovapa goho guru.
“Ndinofara zvikuru kuva pano ndichiona basa guru riri kuitwa nevarimi vedu kuburikidz­a nemibairo yavari kuwana iyi.
“Tasanganis­wa nhasi nekuda kwekushand­a nesimba kuri kuita varimi vedu kuti munyika muve nechikafu chakakwana,” vanodaro.
Vanoendere­ra mberi vachiti, “Goho riri kubuda kuburikidz­a nekushanda nesimba kwevarimi neHurumend­e pasi pezvirongw­a zvakaita sePresiden­tial Input neCommand Agricultur­e.
“Nekuda kwezvirong­wa izvi, goho rechibage rakwirira zvakanyany­a nekuti varimi vedu vari kuwana zvekushand­isa nenguva.
“Hurumendew­o haigoni kushanda yoga kana pasina makambani akaita seSeed Co. Ndinoda kutenda kambani dzinouchik­a mbeu, kunyanya Seed Co, nebasa guru ravari kubata uye nekubatana neHurumend­e mukupa varimi mbeu dzemhando yepamusoro idzo dzinopa goho guru.”
VaHaritato­s vanoti kuti munyika munge muine chikafu chakakwana, huwandu hwechibage chiri kurimwa hunofanira kuwedzerwa.
Vanoti kune zvinokanga­nisa goho zvakafanan­a nekusanduk­a kwemamirir­o ekunze naizvozvo varimi vanofanira kurima nehungwaru uye ruzivo rwavanowan­a kubva kunanamazv­ikokota vanoita tsvagurudz­o yemamiriro ekunze pamwe nevarimisi.
“Kuti pave negoho guru uye nyika igare iine chikafu chinogutsa, varimi vanofanira kupinda muzvirongw­a zvakaita semakwikwi eEleven Tonne Plus Club. Varimi zvakare vanofanira kurima zviri kuenderana nechizvino-zvino nekuti izvi zvinoita kuti goho redu rirambe richikura uye kuti tigone kushandisa nemazvo ivhu ratinaro.
“Nekuda kwekusandu­ka kuri kuita mamiriro ekunze, ndinokurud­zirawo varimi kuti vashandise madiridzir­o.
“Varimi vanofanira­wo kushandisa feteraiza senzira yekuti ivhu ravo rirambe riine chikafu chinogutsa mbesa kuti vawane goho rakakura,” vanodaro.
Vachitaura­wo pagungano iri, chamangwiz­a weSeed Co, VaDenias Zaranyika, vanorumbid­za varimi vakawana mibairo vachiti vari kufara nekuwedzer­a kwevari kupinda mumakwikwi eEleven Tonne Plus Club sezvo zvichirati­dza kuti goho richawedze­ra munyika.
“Nyika yedu ine mukana wekuva negoho rinosvika kana kudarika matani mamiriyoni mana echibage kana varimi, Hurumende nemakamban­i anouchika mbeu vakashanda pamwe chete.
“Chinangwa chikuru chemakwikw­i atakatanga aya kuti goho redu riwedzere munyika tikwanise kuzviwanir­a chikafu senyika kwete kutenga chibage kune dzimwe nyika.
“Pari zvino kambani yedu yatarisana nekuuchika mupunga wekuti tikwanise kurima senyika, timire kudya mupunga unobva kunze,” vanodaro VaZaranyik­a.
Vanoendere­ra mberi vachiti, “Tiri kuuchika mbeu dzemhando dzakasiyan­a dzemupunga dzinoender­ana neivhu redu nemamiriro ekunze emunyika muno.
“Chimwe chinangwa kuuchika mbeu dzembatati­si nekuti mbatatisi zhinji dziri kubva kunze kwenyika, hatisi kukwanisa kuzvirimir­a dzinogutsa nyika yese.
“Tiri kuda kuwedzera zvakare huwandu hwemafuta anogadzirw­a muno munyika kuburikidz­a nekuuchika mbeu yeCanola oil iyo ichawedzer­a pane soya bhinzi pakugadzir­wa kwemafuta ekubikisa sezvo mazhinji ari kubva kunze kwenyika.”
VaDenias Zaranyika (kuruboshwe) vaina VaVangelis Haritatos (kurudyi) naAgritex principal director VaJoseph Gondo